I-china ilahla i-lumen laryngeal mask yomoya kunye ne-silicone lma yomzi mveliso kunye nabathengisi | Biotek
Ukulahleka kwemaski ye-lumen laryngeal mask kunye ne-silicone lma ye-anesthesia
Indawo yokuhamba imaski yaseLaryngeal sisixhobo somoya esihamba phambili esenziwe ngu-Archie Brain, MD kwaye saziswa ngoqheliso lwezonyango ngo-1988. UGqirha Brain usichaze esi sixhobo “njengenye into enokusetyenziselwa ityhubhu ye-endotracheal okanye isigqubuthelo sobuso esinokuphefumla ngokuzenzekelayo. I-mask-lumen ye-laryngeal mask yomoya yenzelwe kunye ne-lumen yokutsala kunye nokungenisa umoya.
Ikhowudi yemveliso: BOT108002
Ubukhulu: 3 #, 4 #, 5 #
I-lumen ye-1.Drainage yokusebenza okungcono kokutsala;
Umngxuma 2.Inflation ngaphakathi ityhubhu ukuze isebenze lula;
Uyilo lwe3Tube ehambelana ngakumbi nolwakhiwo lomntu;
Utshintsho 5.moji phakathi ityhubhu kunye cuff kunokunciphisa intubation trauma
Intubation 6.Easy ngenxa preformed ityhubhu egobile, ngokuthobela abaguli 'umoya indlela
Itywina le-7 elikhuselekileyo lesikhonkwane esithambileyo esenziwe nge-silicone engamanzi emile ukuze ikwazi ukumila kumila kumda wendawo ye-oropharyngeal
I-8 ityhubhu ephambili eyenziwe nge-silicone ekumgangatho ophezulu kunye nokuqina kunokunciphisa umngcipheko wokutyunyuzwa okanye ukuvaleka
Ukusebenza okulula, intubation esebenzayo, ihemodynamics ezinzileyo, idosi encinci yeziyobisi zokungenisa, kunye nokubakho kobunzima obuncinci.
Izinto abicah grade 2.Medical, kunye nokusebenza kakhulu uphawu;
3. Thintela ukuqunjelwa kunye nokuvuselelwa kwesisu.
Egqithileyo I-Lumen Endotracheal Tube kabini
Okulandelayo: Ukulahleka kweLaryngoscope yeVidiyo ye-Intubation